Qalalaasaha Koongo oo u dhaw in heshiis laga gaaro - BBC Somali
Qalalaasaha Koongo oo u dhaw in heshiis laga gaaro
24 Disembar 2016
Image caption Joseph Kabila, Madaxweynaha DR Koongo
Wararka ka imanaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa sheegaya in wadahadallada la doonayo in dhammaadka sanadka soo socda uu xilka uga dego Madaxweyne Joseph Kabila ay u dhaw yihiin in lagu heshiiyo.
Dalka DR Koongo ayaa ku jiray qalalaase tan iyo markii uu madaxweynuhu diiday in uu xilka ka dego kaddib markii todobaadkii la soo dhaafay uu dhamaaday muddo xileedkiisii labaad.
Wufuudda ka qeyb qaadanaysa wadahallada ayaa sheegay in inta badan faafaahinta hindisaha heshiiska la isku afgartay.
Madaxweyne Joseph Kabila ayey suuragal tahay inuu sii hayo xilka ilaa bisha Diseembar ee sanadka soo socda, xilligaasi oo looga dareeri doono doorashooyinka dalkaasi, hasayeeshee waxaanan u suuragalayn inuu markale u tartamo xilka uu hayo.
Ra'iisul Wasaare ayaa waxaa laga soo xuli doonaa mucaaradka. Hasayeeshee waxaa weli la isku afgaran la'yahay awood qaybsiga dowladda kumeel gaarka ah ee la dhisi doono.
Habeenkii Jimcaha oo dhan ayaa waxaa socday wadahadalo aanay wax natiijo ah ka soo bixin, walow ay jirto rajo ah in maanta la saxiixo heshiis.
Waqtiguse waa uu cararayaa oo wadahadallada ay garwadeenka ka tahay kaniisadda catholic-ga, ayaa baadariyiinta kaniisaddaasi waxa ay dib ugu laabanayaan ka qeybgalka ciidda masiixiga.